The Huawei Watch 2 ga-emesị gosipụta ya na MWC 2017 | Gam akporosis
Ọ dị ka ọ dị na njedebe Mobile World Congress agaghị adị oke egwu na njedebe nke ụbọchị. Anyị na-echegbu onwe anyị ma anyị ka nọ, ebe ọ bụ na Huawei ma ọ bụ Samsung ma ọ bụ Xiaomi agaghị anọ na njedebe dị elu na ihe omume ahụ na-eme kwa afọ na mmalite afọ na Barcelona. MWC 2017 nke nwere ike ịchekwa site na ọnụnọ LG yana G6 ya na ụdị 5 nke Sony ga-eweta.
Ma ọ dịkarịa ala, n'akụkụ nke na-emetụ ihe ndị eji ejiji, MWC ga-enwe ihe dị mkpa, ebe ọ bụ na anyị mụtara na Huawei ga-eweta Huawei Watch 2 na MWC kpọmkwem na February 26. Richard Yu, onye isi nke Huawei kwadoro na Weibo na ga-ekpughe ọgbọ nke abụọ nke Huawei Watch 2 na otu ihe omume na njedebe nke ọnwa a, ya mere akara ndị China na-etinye onwe ya dịka otu n'ime ihe ndị dị mkpa maka ihe omume ahụ.
Ihe oyiyi nke smartwatch eyi nke ihe nlere na nke ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ntụaka maka mmụọ nnwere onwe nke onye protagonist nke teas ahụ. Sportdị egwuregwu bụ ihe na-echere anyị na Huawei Watch 2 dị ka anyị nwere ike ịhụ, ọ bụ ezie na anyị hapụrụ ịhapụ ịmara ụfọdụ nkọwa ya.
Dị ka asịrị ndị gara aga, Huawei Watch 2 ga-enye nkwado Njikọ data 4G, nke ga - enye gị ohere ịme ma nata oku ekwentị site na iji kaadị e-SIM nke dị na nche, iji nọrọ onwe gị na - enweghị ịbanye na njikọ Wi-Fi ma ọ bụ otu site na Bluetooth.
A na-atụ anya smartwatch nke Huawei rutere n'ụdị abụọ, otu nke ga-enwe njikọta data na nke ọzọ ga-eji Wi-Fi. N'ụzọ ezi uche dị na nke abụọ a ga - abụ ọnụ ala dị ọnụ ala. Anyị amataghị ma ọ ga - abịa gam akporo Wear 2.0, tinye n'izu gara aga, ọ bụ ezie na ọ ga-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A ga-ekwuputa Huawei Watch 2 na February 26 na MWC 2017